PressReader - Isolezwe: 2019-01-14 - Izeluleko kwabebesizwa wuhlelo IkamvaYouth
Izeluleko kwabebesizwa wuhlelo IkamvaYouth
Isolezwe - 2019-01-14 - IZINDABA -
kwiCAO bese kuthi ekuqaleni konyaka bashaye ujenge ngaphandle kwezikhungo bagcine bengasizwanga ngoba lonke uhlelo lokubhaliswa lusingathwa yiCAO.
“Uma usufike kanjalo esikhungweni uzibeka engcupheni yokudlala abantu abasuke befuna ukwenza imali. Kukhona abantu asebenza ibhizinisi ngenhlupheko yezitshudeni, bazimela kolayini bese bekhokhisa oR100 ukuze ube phambili. Noma ungaba phambili uma ufika ehhovisi ungakaze ubhalise siyakujikisa,” kuchaza uNksz Chemane.
Uthe kubalulekile ukuthi uma ubhalisa ubalule ukuthi uyayidinga indawo yokuhlala ukuze ugweme ukudlala abantu uma usufike nemithwalo uze esikhungweni.
Unxuse abafundi ukuthi bazijwayeze ukufuna ulwazi kusenesikhathi nokuthi bangawabukeli phansi amakolishi amakhono ngoba nawo ayafana namanyuvesi.
UMnuz Samkelo Nkosi wakwaBCCSA utshele abafundi ukuthi kumele bakhumbule ukuthi yonke into inesikhathi sayo.
“Njengamanje yisikhathi senu sokuthi nifunde, okunye nakho kuzoba nesikhathi sakho. Umuntu kumele enze okungangamandla akhe, uma uthole u-55% esifundweni, sebenzela ukuthi uthole okungaphezulu kwalokho ngokuzayo, ungehli. Ungafuni ukuthola u-100% ngoba ubona omunye ewuthola kodwa sebenzela ukuthi uthole ngaphezulu kwalokhu obukutholile,” kusho uNkosi.
Abafundi baphinde baqwashiswa ngabazokufica enyuvesi ngabanye abebekulolu hlelo futhi abanye babo abasizayo ukufundisa kulona.
UMFUNDi kaGrade 11 onqatshelwe ukuphindela esikolweni ngoba efeyilile. Isithombe Tumi Pakkies BAQWASHISWE ngabazokufica emanyuvesi abafundi abebesizwa wuhlelo IkamvaYouth eChesterville abebehalaliselwa ngemiphumela yabo ka-matric yanyakenye